May 21, 2020 - Lupyo News
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာတွေကို စတင်စစ်ဆေးမည့် ရက်ကိုကြေညာလိုက်ပြီ
May 21, 2020 by Lupyo News
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာတွေကို စတင်စစ်ဆေးမည့် ရက်ကိုကြေညာလိုက်ပြီ အောင်စာရင်းလည်း ၂လခန့်နောက်ကျဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ စာစစ်ဌာနတွေမှာ Social Distancing ထားရှိ‌ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး လူလျော့စစ်ဆေးဖို့ မရှိဘူးလို့ သိရပါ တယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ များကို ၂၀၁၉ … ကိုဗစ်ကာလမှာ ရပ်နားထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာတွေကို လာမယ့် ဇွန်လ ၅ရက်နေ့မှာ စတင်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ စာမေးပွဲအဖြေလွှာတွေကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ စာစစ်ဆရာ၊ဆရာမ တွေကိုလည်း ဇွန်လ ၃ရက်နေ့အရောက်သတင်းပို့စေမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် စာစစ်ဌာနတွေမှာ Social Distancing ထားရှိဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း လူဦးရေ လျော့ချ စစ်ဆေးသွားဖို့ မရှိဘူးလို့လည်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ သိန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ သွားရေးလာရေးနဲ့အခြားလိုအပ်ချက်တွေကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ သက်ဆိုင်ရာ … Read more
သတိမထားမိကြတဲ့ ကံညံ့စေမည့် အိမ်နိမိတ်(၁၂)ချက် …
သတိမထားမိကြတဲ့ ကံညံ့စေမည့် အိမ်နိမိတ်(၁၂)ချက် သတိမထားမိကြတဲ့ အိမ်နိမိတ်(၁၂)ချက် (၁) အိမ်ထဲမှာ ထီးမလှန်းပါနဲ့။ အိမ်စောင့်နတ် ကိုယ့် မျက်တတ်တယ်။ (၂) နာရီအကွဲအပျက် ချိတ်မထားပါနဲ့။ ရုတ်တရက်မြည်လျှင် သေနိမိတ်ပါ။ (၃) ဘယ်ပန်းအိုးမှ ပန်းဖြူ၊ ပန်းနီ နှစ်မျိူးထည့်တွဲမထိုးပါနဲ့။ မတော်တဆ ထိခိုက်မူဖြစ်တတ်တယ်။ (၄) နံရံကို ဆေးအစိမ်းရောင်မသုတ်ပါနဲ့။ ရုတ်တရက်အဆိပ်မိတာမျိူး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (၅) အိမ်ထဲမှာ ပုဆိန်၊ ပေါက်တူး၊ စတာတွေမထားပါနဲ့။ အိမ်သားတွေမကြာခဏ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်တယ်။ (၆) အိမ်ထဲမှာ လုပ်ကုလားထိုင်မထားပါနဲ့။ မကျွတ်မလွတ်တွေရှိရင် မြူးတတ်ပါတယ်။ (၇) ဆူးပါတဲ့ ပန်းတွေ အပင်တွေ အိမ်ထဲမှာမစိုက်ပါနဲ့။ အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (၈) အိမ်ထောင်သည်တွေ ကုတင်၊ အိပ်ယာဘေး မှန်မချိတ်ပါနဲ့။ ဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်။ (အိပ်ရင်းကြည့်မရအောင်လွှဲချိတ်ထားပါ) (၉) မနက်အိပ်ယာ … Read more
ချစ်သူ တကယ်ချစ်လား မချစ်လား စမ်းသပ်နည်း
ချစ်သူ တကယ်ချစ်လား မချစ်လား စမ်းသပ်နည်း ချစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ် စကားများနေချိန်ဖုန်းချ ပြစ်ပါ သူတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ပြန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ် အနည်းဆုံး ၅ ခါ တိတိ ပြန်ခေါ်မှ ဖုန်းကိုင်ပေးပါ ဖုန်းကိုင်ပြီရင် သူကို ဘယ်လိုစိတ်ကုန်တယ်ဆိုတာ မရပ်မနားပြောပါ ပြောချင်တာ ပြောပြီရင် ဖုန်း ပါဝါ ပိတ်ပြီ အိပ်လိုက်ပါ သူတကယ်ချစ်နေတယ်ဆိုရင် စာတွေပို့ ထားပါလိမ့်မယ် Facebook . Kakao . Viber . Tango Phone call များစွာ ခေါ်ထားရင်း Message များစွာ ပို့ ထားပါလိမ့်မယ် သဝန်တိုတတ်ရမယ် ရစ်တတ်ရမယ် ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်နေပါစေ ချစ်သူအပေါ်အလိုလိုက် အနစ်နာခံပြီ မိမိ ဘဝကို မပေးဆပ်လိုက်ပါနဲ့… Read more
ဒေးဗဈလားအတှကျ အတိုငျးမသိ ဝမျးနညျးမိသလို ဂုဏျလဲယူပါတယျဆိုတဲ့ L ဆိုငျးဇီ
ဒေးဗစ်လားအတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းနည်းမိသလို ဂုဏ်လဲယူပါတယ်ဆိုတဲ့ L ဆိုင်းဇီ အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Lဆိုင်းဇီ က အမြဲပျော်ပျော်နေတက်သူဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာလဲ သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေနဲ့အတူပျော်စရာလေးတွေကို သာဝေမျှလေ့ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ် ယနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဆရာအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ရိုးရှင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ” တော်ရုံတန်ရုံ ကျွန်မ စာရေးပြီး FB ပေါ် စာ ရေးမတင်တတ်ပါဘူး… တော်ရုံကိစ္စဆို ခေါင်းထဲမှာ မထဲ့တတ်လို့ပါ…ဒီနေ့တော့ ကျွန်မ ရေးပါမယ်… ဒီနေ့ မနက် ၉:၁၅ ကတော့ကျွန်မရဲ့ ဘဝမှာ…ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပီး…သေမလောက်ခံစားရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…ဘုရားသခင်က အရာအားလုံးကိုသိမြင်ပီး ဘုရားဘုန်းအဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲ…မျက်ရည်များနဲ့အတူဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်…😭” “ဒီနေ့ခေတ်မှာ ယုံကြည်သူ အင်္ဂါချင်းဆိုတာ..ဘယ်ဆီများရောက်သွားသလဲလို့တောင်တွေးမိပါတယ်..😢ထပ်တူဝမ်းနဲရမယ့်အချိနိမျိုးမှာ… ကြိတ်ပျော်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ရတော့….ရင်ထဲစို့နစ့်ရလောက်အောင်ပဲ..အလွန်ဝမ်းနဲမိပါတယ်….😢 ဒီနေ့ခေတ်က မီဒီယာခေတ်ဖြစ်နေတော့…ခရစ်ယာန်မီဒီယာတွေကနေ … Read more
ဗဈတိုရီးယားနဲ့ သိနျး၈၀၀ အသံဖိုငျကိစ်စ လငျးလငျးကိုယျတိုငျ ရှနေ့ကွေီးအိမျအထိ ဒဲ့သှားရှငျးပွီ
“ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား ရှေ့နေကြီးပါလား သူနဲ့ဂိုလ်ရှယ်လေးအတင်းချထားတဲ့အသံဖိုင်ကို ကျုပ်ကပဲ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတယ်ဆိုပဲ ကျုပ်အကောင့်ကတင်တာသူတို့သိပီး ရက်၂၀လောက်ရှိမှ ငြိမ်နေလို့ သိအောင်ထပ်တင်ပေးတာပဲရှိတယ် ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်ပီးမုသားတွေအရမ်းပြောလွန်းတယ် အံသြစရာကြီးဟေ့” Han Nyain OO ————————– unicode ဗဈတိုရီးယားနဲ့ သိနျး၈၀၀ အသံဖိုငျကိစ်စ လငျးလငျးကိုယျတိုငျ ရှနေ့ကွေီးအိမျအထိ ဒဲ့သှားရှငျးပွီ “ဗွောငျလိမျဗွောငျစား ရှနေ့ကွေီးပါလား သူနဲ့ဂိုလျရှယျလေးအတငျးခထြားတဲ့အသံဖိုငျကို ကြုပျကပဲ လုပျကွံဖနျတီးထားတယျဆိုပဲ ကြုပျအကောငျ့ကတငျတာသူတို့သိပီး ရကျ၂ဝလောကျရှိမှ ငွိမျနလေို့ သိအောငျထပျတငျပေးတာပဲရှိတယျ ရှနေ့တေယောကျဖွဈပီးမုသားတှအေရမျးပွောလှနျးတယျ အံသွစရာကွီးဟေ့” Han Nyain OO
မန္တလေးက မွေ့ယာပေါ်မှာ မြွေမောင်နှံ မိတ်လိုက်နေတဲ့ ရုပ်သံ အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေ
မန္တလေးက မွေ့ယာပေါ်မှာ မြွေမောင်နှံ မိတ်လိုက်နေတဲ့ ရုပ်သံ အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေ ဝင်ငွေတိုးပွါးလာဘ်ရွှင်စေပါတယ်တဲ့ ​ရှဲပြီးဆုတောင်းပါ… ဗီဒီယိုကို အောက်ဆုံးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်… မန္တလေး Unison Tea Shop – Kyauk Wine Branch မှာ ဝန်ထမ်းတွေအခန်းထဲ လင်းမြွေမောင်နှံမိတ်လိုက်နေတဲ့အချိန် ၀န်ထမ်းများက Video ရိုက်ယူထားတာပါ… မြွေဆိုတာ တောထဲပဲ မိတ်လိုက်တဲ့ အမျိုးတွေပါ ဒီမြွေ မောင်နှံကတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခန်းထဲမှာ မိတ်လိုက်နေရာကနေ မွေ့ယာပေါ်အထိ ထူးထူးဆန်းဆန်း တက်ပြီး မိတ်လိုက်နေကြတာပါ… မြင်ဖူးအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…ဘယ်လိုယူဆကြသလဲဆိုတာ ကွန့်မန့်မှာပြောပေးသွားကြပါအုံး…။ Ko Shwethura Video Khon Sit Thway Hein ———————– UNICODE မှယေ့ာပျေါမှာ မွှမေောငျနှံ မိတျလိုကျနတေဲ့ ရုပျသံ အှနျလိုငျးမှာ နာမညျကွီးနေ … Read more
နေ့တိုင်းဆွမ်းလောင်းတဲ့ အဖွားအိုကို တိုက်အိမ် ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းလေး ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း၊ ပရာကျင်းပူရီခရိုင်ထဲမှာ ဒုလ္လဘရဟန်းခံခဲ့သူတစ်ဦးက သူ့ကို မနက်တိုင်းဆွမ်းလောင်းခဲ့တဲ့ အဘွားအိုအတွက် တိုက်အိမ်တစ်လုံး ဆောက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ နိုင်းနတ်ထဝုတ် ငူးဆွန် ဆိုသူဟာ ဘန်ကောက်က ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက ပရာကျင်းပူရီခရိုင် ကပင်ပူရီမြို့ရှိ ဆာမတ်ခီး ဆမိုးဆွန်ကျောင်းတိုက်မှာ ဒုလ္လဘရဟန်းခံခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းဘဝမှာ ဆွမ်းခံထွက်စဉ် ယိုင်နဲ့နဲ့အိမ်စုတ်တစ်လုံးရှေ့ကနေ မနက်တိုင်း ဆွမ်း လာလောင်းတဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို သူက သတိထားမိနေပါတယ်။ အဆိုပါ အဘွားအိုဟာ အသက် ရ၀ ရွယ်ရှိ နန်းဆိုဝဖား ဖွန်းလ်ဆင် ဆိုသူဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကာ သားသမီး ၄ ယောက်ရှိပေမယ့် အားလုံးက အဝေးမှာ အိမ်ထောင်အသီးသီး ကျသွားလို့ တဲအိမ်လေးမှာ တစ်ဦးတည်းနေနေ … Read more
CCTV ကြည့်လိုက်တာ ကံကောင်းလိုက်တဲ့ ဘုန်းဘုန်း ပါလားလို့ … တကယ့်ကို သီသီလေးပါပဲ… ဗွီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးမှာ ပါသည် CCTV ကြည့်လိုက်တာ ကံကောင်းလိုက်တဲ့ ဘုန်းဘုန်း ပါလားလို့ … တကယ့်ကို သီသီလေးပါပဲ ဒီနေ့ မနက် ၅နာရီ မိနစ်၂၀ကျော် အချိန်ခန့်တွင် မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် သပြုချောင်ကျေးရွာ အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် ကားလမ်းဘေးတွင် Cantar ကားတစီး စလစ်ဖြစ်ပြီး တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့။ အဆိုပါယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုတွင် လိုက်ပါစီးနင်းသူများ အသေပျောက်မရှိပဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများသာရခဲ့ပါကြောင်းနှင့်လူနာများအား သထုံခရိုင်ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ CCTVကို ကျနော့်သူငယ်ချင်း နေဇာထွန်းဆိုင်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ #မိုးရွာလျှင်ယာဉ်များဖြည်းဖြည်းမောင်းကြပါ သတင်းဓာတ်ပုံ – ကိုသောင်း..ရာမညမြေ ———————— Unicode CCTV ကွညျ့လိုကျတာ … Read more
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အမှန်တရား (၄) ခု
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အမှန်တရား (၄) ခု ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရူးခါနေအောင် ချစ်ခဲ့ဖူးလား…? တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆီမှာ ကိုယ်မသိပဲ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါက တမင် ဖန်တီးလုပ်ယူထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ သူ့ကို ယုံကြည်လာမယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ယုံကြည်မှု ဆိုတာ ကပ်ပါလာတတ်ပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် သူ့ကိုယုံကြည်ပေးချင်စိတ် ဖြစ်လာပြီး သူ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် အရာရာကို ယုံကြည်လိုက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။ အမှားတွေကို ခွင့်လွှတ်တတ် လာမယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူလုပ်မိတဲ့အမှားတွေဟာ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်မိတဲ့အခါ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေ … Read more
အတူမနေတာကြာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲ
September 17, 2020 May 21, 2020 by Lupyo News
အတူမနေတာကြာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲ ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar | ရေးသားသူ Dr. Thurein Hlaing Win အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ သဘာဝတရားရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ အတူနေဖို့ (လိင်ဆက်ဆံဖို့) ခန္ဓါကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ဟော်မုန်းတွေရဲ့အချိုးအစားကို စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြောင်းရင်းခံချင်းက တူကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ အတူမနေနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေသူတွေအနေနဲ့က အခက်အခဲရှိတာပေါ့။ ပြဿနာကတော့ အတူမနေတာ ကြာလာတဲ့အခါ ယောက်ျားရော မိန်းမမှာပါ ဆိုးကျိုးတွေရှိလာပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အတူမနေတာကြာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ၁။ စိတ်ဖိစီးမှုများလာမယ်။ အတူနေတာက စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်သွားတာနဲ့ အတူနေတဲ့အခါ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျသွားစေဖို့ အကြီးအကျယ်အထောက်အကူပြုပြီး နုပျိုကျန်းမာစေပါတယ်။ အတူမနေတာကြာရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေတဲ့ဟော်မုန်းတွေ မထွက်တော့ အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ … Read more